हिमाल खबर -काठमाडौं
गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव २०६२/६३ को आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि २०७२ सालमा संविधान जारी भएको अवधिका सर्वाधिक महत्वको स्थानमा रहेका व्यक्ति हुन्। आज नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा हिमालखबरसँगको कुराकानीमा डा. यादवले आफ्ना कार्यकालका केही महत्वपूर्ण प्रसंगसँगै संविधानका विशेषता र यसमाथि रहेको जोखिमबारे खुलेर कुरा गरे।
प्रस्तुत छ, किरण नेपाल र तुफान न्याैपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, पहिलो पटक संविधानसभाद्वारा जारी संविधान जनतामा अर्पण गर्ने अवसर पनि पाउनुभयो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको जीवनमा त्यसको के अर्थ छ ?
देशवासीको आशीर्वादले मैले त्यो अवसर पाएँ, मेरो अहोभाग्य हो। त्यो पदको मर्यादाभित्र बसेर गर्नुपर्ने काम कति गर्न सकें, सकिनँ त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। मैले जुन मौका पाएँ, त्यसलाई आफ्नो क्षमता अनुसार पूरा गरें भन्ने लाग्छ।
तपाईंले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा संविधानको प्रतिलाई ढोग्नुभएको थियो, त्यो ढोग केका लागि थियो ?
त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक दिन थियो। म विद्यार्थी हुँदादेखि नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि लागेको व्यक्ति हुँ। राणाकालबारे पढे/सुनेका थियौं। पञ्चायतकाल भोगेका थियौं। बहुदलकाल र २०६२/६३ को आन्दोलनका हामी नै ‘एक्टर’ थियौं। त्यतिबेला (संविधान जारी गर्दा) मैले देशको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको संघर्षको इतिहास सम्झिएँ। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र राजनीतिक दलको पीडा आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ। त्यो सबै झलल्ल टीभीको स्क्रिन जस्तो आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दा म अलि भावुक भएको थिएँ।
संविधान घोषणा गर्ने मौका मैले नै पाएँ र आज यो लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनताको नासो नेपाली जनतालाई पस्किन गइरहेको छु भन्ने सोचाइ आयो। त्यो म एक्लैको उपलब्धि भने थिएन, नेपाली जनता, नेता र दलहरूको संघर्षको इतिहासको ‘प्रोडक्ट’को रूपमा संविधान आएको थियो।
एउटा कुरा अलि खिन्नता पनि थियो। मधेशमा गोली चल्दै थियो। मधेशी दलहरू संविधानसभा छाडेर गएका थिए। म मधेश, पहाड, हिमाल जोड्न हिंडेको मान्छे, यो सबैको देश हो, सबैले मिलेर जानुपर्छ र आफ्नो महसूस गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। संविधान आउँदा सबैले बत्ती बाल्नुपर्ने हो। सबै मिल्दा मात्र राष्ट्र सफल हुन्छ र म पनि सफल हुन्छु भन्ने सोचेका कारण अलिकति खिन्नता भने थियो।
प्रकाशित मिति: : 2020-09-20 00:27:48